ejije na njem nlegharị anya – Igbo Services
ejije na njem nlegharị anya
Onye na-azọ ọkwa ADC họpụtara onye na-eme ihe nkiri na Naijiria bụ Tonto Dikeh.
Chigo	 Jun 24, 2022 0
Njem Amerika m ga-eme bụ iji gosi omenala Afrika -Davido.
Headies Academy na-ekwupụta ngalaba atọ ọzọ.
Onye na-abụ abụ Naijiria Tems ekpughere nchoputa Reflux Laryngitis.
Afịrịka Agụmụakwụkwọ Ahụike Akụkọ na ewuewu Azụmahịa Egwuriegwu Isiokwu dị mkpa
Mega concert ga-eme na Abuja.
Chigo	 Jun 15, 2022 0
N'ihi ihe ịga nke ọma nke ihe nkiri Mega nke e mere na Lagos steeti n'abalị iri na otu nke ọnwa Juun, afọ 2022, ndị na-ese ihe na Naịjirịa na ndị Independent Nigerian Electoral Commission (INEC), kwetara ime ya n'Abuja. …
Onye amaama n’ịmepụta ihe ịkpa ọchị bụ Madam Social anwụọla.
Chigo	 Jun 10, 2022 0
Mama Roseline Onwujekwe, onye amara aha ya bụ Madam Social bụ onye na-akpa ọchị na Naịjirịa, bụ onye ama ama n'afọ gara aga. Akụkọ na-ekwu na a mụrụ ya na Nri wee lụọ nwunye na Nibo dị na mpaghara Anambra steeti Anambra. A kọrọ na…
Afrika: Forbes weputara 30 n’okpuru 30 ndepụta.
Chigo	 Jun 9, 2022 0
Forbes ewepụtala ndepụta ya maka Forbes Afrika 30 nke afọ a n'okpuru 30 ndepụta nke na-egosi ndị Africa bụ ndị ọchụnta ego ọhụrụ, teknụzụ teknụzụ, kpakpando egwuregwu na ihe okike nwere mmetụta na-eduga Africa oria ojoo. …
Onye na-eme ihe nkiri Naijiria Osas Ighodaro, na-anata nhọpụta ihe nrite mba ụwa.
Onye na-eme ihe nkiri Naijiria na-eme ihe nkiri Osas Ighodaro enwetala nhọpụta mbụ ya na mba ụwa, maka ọrụ ya na Play Network Studios 'Rattlesnake' The Ahanna Story. Osas Ighodaro bụ onye Naijirịa America na-eme ihe…
Davido setịpụrụ ịhapụ EP nkwonkwo na Kizz Daniel.
Chigo	 Jun 3, 2022 0
. Ndị egwu Naijiria abụọ nwere nkà, Davido na Kizz Daniel ejikọtala aka ọnụ na ndị Fans nwere obi ụtọ gburugburu ụwa na ọkwa ọhụrụ ha. Ndị na-abụ abụ Naijiria nwetara ihe nrite, Davido na Kizz Daniel were n'aka soshal midia…
Ụlọ akwụkwọ ihe nkiri Africa na-agbatị ụbọchị maka ntinye ihe nkiri.
Chigo	 Jun 2, 2022 0
Ụlọ akwụkwọ ihe nkiri Africa akwalitela ụbọchị maka ntinye ihe nkiri maka nhọpụta rue 15th June, 2022. Onye kpọbatara na onye malitere, Peace Anyiam-Osigwe, gbara ndị na-eme ihe nkiri Africa ume ka ha gaa n'ihu…
Nissi Ogulu ga-ewepụta nka dijitalụ isiokwu egwu Africa.
Naijiria Multi-talented artist, Nissi Ogulu ewepụtala "Jigsaw Tribe", na mmekorita ya na ụwa na-eduga cryptocurrency ikpo okwu Binance. Onye dabere na Lọndọn, Nissi Ogulu bụ onye Naijiria na-abụ abụ na nwanne onye ama…
Eucharia Anunobi ekwuola nke bụ eziokwu gbasara akụkọ agbamakwụkwọ ya na-ewu ugbua.
CHIDI IGWE	 May 22, 2022 0
Dịka a akụkọ a siri kwuo, ya bụ agbamakwụkwọ kwesiri ịdị n'etiti ya na otu nwaokorobịa gbara afọ iri abuo na asaa nke a sị aha ya bụ Lucky Oparah. Ya bụ akụkọ kwukwara na agbamakwụkwọ ahụ ga-adị n'ụbọchị iri atọ nke ọnwa Jun afọ…
Nwafọ Naijiria eji iti egwu were mara bụ,Damini Ebunoluwa Ogulu onye eji Burna boy mara,eturula ugo,dika obu onye isi ojii mbụ igu egwu n’oge mmemme anọ bụ BET Hip Hop Awards, the Grammy Awards, the BRIT Award nakwa the Billboard Awards.…
Mkpa dị n’ịnabata nwunye ọhụrụ n’ala Igbo
CHIDI IGWE	 May 16, 2022 0
N'ụfọdụ ebe n'ala Igbo, a na-anabata nwunye ọhụrụ n'ụzọ pụrụiche. Tupu a lụọ nwaanyị na ọwụwa anyanwụ Naịjirịa, e nwere ihe dị iche iche a na-eme, nke gụnyere: Ịjụ ese: Ọ bụghị naanị ndị chọrọ ịlụ onwe ha ga-ekwekọrịta ịlụ,…